Adhara Traore Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
musha NYAYA DZEEEOPEAN Adhara Traore Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Adhara Traore Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi. Credits kuna Twitter naJoe
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rokuti "Usain Bolt". Yedu Adhara Traore Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Rise yeAdama Traore. Image Credits: sununguka, SportsMole, Joe uye FC-Barcelona
Kuongorora kwacho kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga / hwemhuri, dzidzo / basa rake rekuvaka, hupenyu hwebasa repakutanga, nzira yekurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake muswe anovaka uye nekumhanya izvo zvinomuita mumwe weanomhanyisa bhora muFIFA nepasirese. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Adam Traore's biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, mazita ake akazara ndiAdama Traoré Diarra. Adamu Traore sekudanwa kwaanowanzoitwa akaberekwa pazuva re25th raJanuary 1996 kuna amai vake, Fatoumata uye baba, Baba Traoré mudhorobha reL'Hospitalet de Llobregat, maodzanyemba akadziva kumadokero kweBarcelona. Iye ndiye mwanakomana wechipiri uye mwana kubva pavana vatatu vanozvarwa kuvabereki vake vakanaka vanoratidzwa pazasi.
Sangana naAdama Traore Vabereki- Amai vake (Fatoumata) uye Baba (Baba). Chikwereti kuna IG
Vabereki vaAdra Traore ndivo vanobva kuSpain vanobva kune avo vane mhuri / mabvakirwo kubva kuMali, nyika yakavharwa iri muWest Africa. Ingori Nyika yokuMadokero yeAfrica yeMali inoumba hafu yeSahara Desert uye ndiyo nyika yechisere pakukura muAfrica.
Mepu inoratidza nyika yeMali- Adamu Traore Mhuri Dzinotangira. Image Chikwereti: TheFactFile
Vabereki vaAdra Traore vakasiya nyika yavo yeMali kuti vagare muBarcelona, ​​iro guta ravanofunga kuti rinogona kupa vana vavo mikana iri nani. Chakanga chiri chisarudzo chakabhadhara.
Kukura, Adamu Traore yakanga isingaite senyeredzi dzenhabvu (semuenzaniso Gerard Pique, Mario Gotze uye Hugo Lloris) aigara hupenyu hwehupfumi asati asvika stardom. Aibva kumhuri yepakati uye yemhuri, imwe yaive nevabereki aisakwanisa kukwanisa iye mutsva wemuunganidzwa wematoyi kwaari semwana, bhora chete.
Adhama akakurira pamwe nemunun'una wake Moha uye hanzvadzi inoyevedza, Asa mumhuri inofarira nhabvu. Sezvo akarererwa muSpain guta reBarcelona, ​​zvaingova izvo zvakasikwa kuti iye nemhuri yese vade murudo nemutambo wakanaka wenhabvu nekutenda kuFC Barcelona.
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Rudo rwemutambo rwakakunda pamimwe mitambo sezvo Adhama nemunun'una wake Moh vakatanga kufudza nhabvu muminda yaive pedyo yeEC L'Hospitalet. Nguva pfupi yapfuura, ivo vaviri vakatanga kugamuchira dzidzo yebhola kuCentre D'Esports L'Hospitalet, kirabhu umo ivo vaviri vakafambira mberi zvinoshamisa.
Adamu Traore akagamuchira dzidziso yake yekutanga yebhola paEC L'Hospitalet Nhabvu. Image Credits: BBDFutbool,& Joe.
Pakutanga, vaviri vaviri hama dzaiziva kuti ivo vane tarenda uye vanogona kuita chimwe chinhu chakakura kubva mubhola. Kune vabereki vavo uye nhengo dzemhuri, pakanga pasina kumbove nekusahadzika kwakawanda kuti Moha naAdama vaifamba munzira chaipo. NdiAdama Traore uyo akafambira mberi nekukurumidza kupfuura munin'ina wake nekuti aive ane hunyanzvi.
Mugore 2004, hope dzemhuri yekwaTraore dzakabhadhara. FC Barcelona inozivikanwa mudzidzi La Masia yakakoka Adhama miedzo. Munun'una wake Moh akokwa nemuvakidzani Espanyol makore maviri gare gare.
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Mushure menguva pfupi nemuvakidzani weEC L'Hospitalet, kuyedzwa kwakabudirira kwakaona Adhara Traoré achijoinirana neFC Barcelona inozivikanwa academy La Masia mu2004 aine makore masere.
Hupenyu hwepakutanga hweAdra Traore neLa Masia- FC Barcelona Academy. Image Chikwereti: Joe
Kare ikako uye parizvino, kwaive kurota kwemwana wese kubatana naLa Masia, imwe yemitambo mikuru yemitambo munyika. Pakjoinha kwainakidza kune mudiki Adhama. Kuti asangane nemakwikwi akaomeswa, aifanira kuita zvibayiro zvakawanda senge mazuva ekuzvarwa asipo uye zvinhu zvaanga akatarisira kumba. Zvibayiro izvi zvese zvaidikanwa kuitira kuti atange kuratidzira nechirabhu.
Waizviziva here? Mwaka (2004) iyo Adamu akabatanidza neLa Masia inoenderana gore Lionel Messi yakaputika mune chiitiko chevakuru venhabvu. Kare ikako, Adhama pamwe chete nevamwe vana vese vakatevera tsoka dzevakomana gamba ravo AKA La Pulga (GOAT).
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Pasi penzira neLa Masia, Adhama akaramba achiratidza kufambira mberi sezvaaifamba nenzira dzechikoro. Kunyangwe apfupi, simba rake, simba nemheni kumhanya zvakamuita mukurumbira pazera rehudiki. Waizviziva here? Adamu Traore akawana zita rezita 'Usain Bolt'nekuda kwekukurumidza kwake kuputika panguva yemakore ake formative muBarcelona La Masia academy.
Adamu Traore akatamba pamwe nevapikisi vakura uye vakuru kwaari. Kiredhiti FC-Barcelona
Nekuti aive akanaka iyeye, Adhama aigara achishandiswa pakurwisa vanopikisana nemazera epamusoro uye akakunda kurwisa vatambi vakuru kwaari. Akashandiswa ese sekorudyi-kumashure uye akarwisa pamazuva ake kuLa Masia.
Vamwe vana vakadonhedzwa mumakwikwi makuru La Masia academy nekuda kwekushaikwa kwemabasa, Adhama Traore anga asiri sezvo aive akanaka pakuita kuti shuvo yake ive basa rake. Pazasi pane chidimbu chevhidhiyo chiratidzo chinoratidza zvinoshamisa zvinoratidzwa zvechikwata chekurapa kwenhabvu panguva yake kuLa Masia. Chikwereti Chakakosha kune AirFutbol.
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Mugore 2013, Adhara Traore akajaira neBarcelona B, achivharidzira kupfuura 40 ligi kuoneka kwerutivi. Aive akabatsira pakubatsira timu yeBar B B mukukunda 2014 UEFA Youth League.
Adamu Traore achipemberera UEFA Youth League nevatambi veboka ravo. Image Chikwereti: TalkSports
Gore rimwe chetero, Adhama akaita basa rake reunyanzvi neFC Barcelona danho repamusoro paakatsiva Neymar mune kukunda kweLa Liga. Nekuda kwekuita kwake kunonakidza kuFC Barcelona timu B uye nechikwata chepamusoro kutanga, makirabhu muEurope yose akauya achidzingirira mushure mekusaina kwake.
Pa 14 Nyamavhuvhu 2015, Adamu Traoré akabatana nePremier League kirabhu Aston Villa uye gore rakatevera, Middlesbrough kwaakaramba achishandisa ake kukurumidza kukonzera matambudziko akati wandei evadziviriri vanopikisa. Adamu Traore mutambo wepamoyo wekubudirira naBoro akauya pakakurumbira hat-trick mubayiro unova; “(1) iyo Middlesbrough's Fans 'Player yeGore, (2) Yechidiki Mutambi weGore reMiddlesbrough's uye (3) Iyo Middlesbrough's Players' Player yeGore.
Adamu Traore posing nemumwe weMiddlesbrough Award yake. Kiredhiti Middlesbrough Official Webhusaiti
Kubudirira kwaAdamu Traoré kuMiddlesbrough kwakakwezva Wolverhampton Wanderers iyo isina kumbotenga kuti imutenge. Murairidzi wake, Nuno Espírito Santo akawana kubudirira kwe tremendoius muchinangwa chake chekushandisa kumhanyisa uye simba kuburikidza ne-anti-kurwisa kuranga makaneta evanopikisa.
Adamu Traore- Inoshandiswa sekupedzisa kwemutambo chombo kuranga vakaneta vanopikisana
Pane yechikamu chisingakanganwike, kumhanya uye simba reAdama Traore zvakanyanya kubatwa pa6th yaGumiguru 2019. Raive zuva rakadzikwa naAdama Pep Guardiola'akaomesa Man City chikepe apo akahwina zvibodzwa zviviri mukukunda kure (0-2), iyo feat inova imwe yezvakanakisa zvikuru mune rake reunyanzvi basa.
Zuva raAdama Traore rakaranga Man City. Kiredhiti 90Min
Ikozvino pasina kukahadzika, Adamu akaita kuti vateveri venhabvu vatende kuti kukurumidza uye simba ndechimwe chezvinhu zvinodiwa pamberi peanoda nhabvu yemazuva ano. Vamwe vese, sezvavanotaura, yave nhoroondo.
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimukira kwake kumukurumbira uye mukurumbira kunyanya muFIFA, vateveri vazhinji vakafungisisa nezvekuziva kana Adamu Traore aine musikana kana mukadzi. Pasina mubvunzo, muviri wake uye kutaridzika zvakanaka kwaizomuita iye kuti ave pane mukomana mukomana rondedzero yevazhinji vateveri vevakadzi.
Ndiani Adhireni Traore Musikana? Chikwereti kuna IG
Senge panguva yekunyora, taona kuti hapana hutsotsi hweAdama kuva nemusikana kana kubatikana mune chero hukama. Kubva pane izvo zvinoratidzika, anosarudza kutarisa nezvebasa rake rebhola. Nekudaro, isu tinoona vazhinji vechidiki vechidiki vebbandanda vanozvibata nenzira iyi kuti varambe vakaderera kuburikidza nematanho akakosha ebasa ravo. Zvinogonawo kunge kuti Adhama ane musikana asi anosarudza kusaita hukama hwake naye paruzhinji izvozvi.
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwaAdama Traore kubva pagomba kwaizokubatsira kuwana mufananidzo uri nani wake. Kutanga kubva, pakutanga kutarisa kweAdamu, iwe unogona kuona kutanga kwechimwe chinhu chine simba uye chakavhiringidza. Pamusoro peiyo pitch, anoripira zvakanyanya kune ake kurovedza muviri, chikonzero chechikamu chakakura chetsandanyama uye muviri.
Mubvunzurudzo pamwe Marca, Adhama akataura zvakapesana, kuti haasi wekusimudza uremu. Mumashoko ake; "Handina kusimudza huremu hwani." Ndinoziva kuti vanhu havangazvitendi, asi ichokwadi. ”. Mubvunzo ndouyu; Do iwe unoverenga chinyorwa ichi unotenda zvaakataura kunyangwe iwe uchifunga nezvemufananidzo wake se 17-ane makore-bhora?
Mufananidzo weAdama Traore se17-gore-makore-bhora. Mufananidzo Chikwereti: Trollfootball
Kechipiri pahupenyu hwake, Adhama Traore munhu anogara aine chimwe chinhu chekupa nyika uye icho hachisi chinhu kunze kwe "havukavu"Anounza kumutambo wenhabvu. Iwe haungavi mumapoka Messi uye C Ronaldo, asi Adamu Traore akagadzira zvake nyika yehukuru sekucherechedzwa mukati FIFA18 Tuzo. Uchapupu hwevhidhiyo (pazasi).
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Kunze kwehuwandu hwevanenge vangangoita 55,000 Malian vanoenda kuSpain (Efe Mishumo), mhuri yeAdra Traore iri pakati pevashoma vakabudirira vakazviitira zita. Mhuri iri kuverengerwa kusimudzira yavo nzira inoenda kurusununguko rwemari vachishandisa nhabvu senzira.
Adamu Traore Baba: Baba vake avo vanongotaurwa ne zita rekuti "Hag"NdeMariya wakachena kubva kumadzitateguru. Paunotarisa Baba vari pamufananidzo pazasi nemwanakomana wavo, chinhu chimwe chinouya mupfungwa. Iro chimiro chemuviri wababa nemwanakomana. (izvo tsandanyama dzinovaka!. Unogona kupedzisa kutaura kuti Adhama akatora baba vake vachivaka muviri wake.
Adamu Traore anoenda nababa. Chikwereti: IG
Baba kufanana nevakawanda baba vakanaka vakabatsira mukupa rutsigiro rweAdhama apo aive kuCatalonia fekesheni yebhola.
Amai vaAra Traore: Fatoumata ndiro zita rake uye anogara achinzi 'anotsigira mum'. Zvinoenderana nemwanakomana wake Adamu; "Mai vangu vagara vachinditsigira, vachindimhanyisa pese uye vachinditora semutambi wechidiki. Iye aive aripo neni, achindiratidza rutsigiro, zuva randakasainira Wolves. "
Adamu Traore naamai vake. Chikwereti: IG
Tichitarisa kubva pamufananidzo wavo pamusoro, unogona kuudza kuti rudo runoratidzika rwuripo pakati pevaviri naAdama naForoumata, iyo inodarika zvimwe zvese zvinodiwa nemoyo yavo.
Adamu Traore's Sista: Pazasi pacheche akanaka hanzvadzi yaAdama inoenda zita raAsa. Iye panguva yekunyora, anogara kuSpain uye kazhinji anoshanyira mukoma wake mukuru kuEngland.
Adamu Traore anomira pamwe nehanzvadzi yake Asa. Chikwereti: IG
Adhama Traore's Hama: Mohamed Traoré Diarra uyo anozivikanwa zvakare nezita rezita rekuti "Moha"Ndiye mukoma weAdamu. Moha (akaberekwa 29th Mbudzi 1994) ane makore maviri akanyanya kupfuura Adhama zvakare akavawo nyanzvi yebhola.
Sangana naAdama Traore's mukoma. Mufananidzo Wekodhi: Nkistra. Chikwereti kuna IG
Senzira yekubhadhara kutendeka kumidzi yemhuri yake, Moha pane 17th yaFebruary 2014 switch kubva mukutamba kuSpain kutamba Mali. Panguva yekunyora, parizvino anotamba semberi kuSpanish kirabhu Hércules muSegunda División B inova yechitatu chikamu cheSpanish nhabvu yeligi system.
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Kune mutambi wenhabvu anotambira 2.6 Million Euro (2.2 Million Pound) pagore panguva yekunyora, zvirokwazvo kune mari yakakwana yehupenyu chaihwo. Kubudirira kwemari kwaAdama Traore kunosungirwa zvakananga nekusvirwa kwake semutambi wenhabvu.
Kugadzira mari zhinji haipfuure ichirarama mararamiro ekunze ayo anoonekwa nyore nevatambi vanoratidzira dzimba huru nemotokari dzinotsvedza. Adhama akangwara pamusoro pemabatiro aanoshandisa mari yake. Iye anotyaira avhareji mota uye anorarama a average mararamiro kune mutambi wenhabvu.
Adhara Traore Mararamiro Echokwadi. Mifananidzo Credits: CNBC, IG uye Arabian Bhizinesi. Chikwereti ku Twitter
Adhama Traore Wevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Iyo Yakaderera Yemament muBasa Rake: Ndira 2016 yakanyorwa seimwe yenguva dzakaipisisa dzebasa rake. Waizviziva here? Admia Traore akabvisirwa muAston Villa timu yepamusoro nekuda kwekudzokororwa kwezviitiko zvekusazvibata. Iyi sarudzo yakava neyakaipa kuchikwata chake sezvo divi rake rakadzoserwa kubva kuChirungu kumusoro-kwekutiza pakupera mwaka iwo.
Ane Makanaka CV: Mazhinji mukurumbira wenhabvu akauya kuna Adamu Traore achitamba FIFA uyezve, Wolves. Chokwadi ndechekuti, anomhanya-mhanya uye ane simba mutambi wenhabvu akauya nenzira refu sekucherechedzwa kubva kuCV yake iyo inotaura yakawanda yezvaakawana.
Adamu Traore Untold Nhamba Yevatarisiri Kuremekedzwa.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Adhara Traore Yevana Nyaya uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Martin Braithwaite Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Danio Olmo Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Facts
Dhanyeri Parejo Nyaya dzeVana Diki Plus Untold Biography Chokwadi
Ansu Fati Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Facts
Clement Lenglet Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Dani Ceballos Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CHOKWADI CHINOGONESESWA STORI
Kylian Mbappe Utano Hwokubuda Nhau Untold Biography Facts
Dai 20, 2017
Ronaldo Luis Nazario de Lima Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
Dai 13, 2017
© Copyright 2016 - Musoro wakagadzirwa neHagePlex Technologies
Denis Suarez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Ivan Rakitic Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts
Rodrigo Hernandez Urubhabhatidzo Mubhuku Plus Untold Biography Facts
Jose Antonio Reyes Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts